आज पीनम्ब्रल चन्द्रग्रहण लाग्दै, कस्ताे छ असर ? | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
Home समाचार राष्ट्रिय समाचार आज पीनम्ब्रल चन्द्रग्रहण लाग्दै, कस्ताे छ असर ?
आज पीनम्ब्रल चन्द्रग्रहण लाग्दै, कस्ताे छ असर ?
२०७७, २३ जेष्ठ शुक्रबार १०:०४
शुक्रबार (आज) चन्द्रग्रहण लाग्दै छ । यसलाई पीनम्ब्रल चन्द्रग्रहण अर्थात् उपग्रहण भनिएको छ । यो पृथ्वीको मुख्य छायाँको बाहिरी हिस्सा मात्रै चन्द्रमामा पर्ने भएकाले यसलाई पीनम्ब्रल अर्थात् उपग्रहण भनिएको वैज्ञनिकहरुको भनाइ छ ।
पृथ्वीको मुख्य छायाँको बाहिरी हिस्साले गर्दा चन्द्रमाकाे चमक फिक्का पार्नाले यो ग्रहण हुने गर्दछ । वरिष्ठ वैज्ञानिक टीवी वेंकटेश्वरनले यो उपछायाँ ग्रहण भएको कारण यसको असर धेरै नदेखिने बताएका छन् ।
यो ग्रहण आज राति साढे ११ बजेबाट शुरु भएर शनिबार बिहान २ बजेर ४९ मिनेटमा सकिने छ । जसमा १ बजेर ९ मिनेटमा ग्रहणको प्रभाव सबैभन्दा धेरै रहने वैज्ञानिकहरुले बताएका छन् । वरिष्ठ वैज्ञानिक टीवी वेंकटेश्वरनले चन्द्रमामा मात्र हल्का छाया देखिने बताएका छन् । यसले चन्द्रमाको ५८ प्रतिशत हिस्सा मात्र ढाक्ने उल्लेख गरे ।
आज लाग्दै गरेको चन्द्रग्रहण यो वर्षको दोस्रो पटक हो । यसअघि १० जनवरीमा चन्द्रग्रहण लागेको थियो । ग्रहणलाई दक्षिण एशियासहित, युरोप, अस्ट्रेलिया र अफ्रिकाबाट हेर्न सकिनेछ । वेंकटेश्वरनले यो ग्रहण धेरै राम्रसँग नियाल्दा मात्रै देख्न सकिने बताएका छन् ।यदि अाकाश सफा भए चन्द्रमाको उत्तरी र दक्षिणी क्षेत्रमा चन्द्रमाको चमकमा केही अन्तर देख्न सकिने उनले बताए ।
Previous articleआजबाट विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीहरुको उद्धार सुरु
Next articleगित संगितमा जम्दै जिसी